Dowlada oo ka noqotay yarayntii taageerada ardada | Somaliska
Ka dib cadaadis iyo cambaarayn badan oo kaga timid dhinaca ardada, mucaaradka iyo macalimiinta ayaa raysal wasaaraha Sweden Fredrik Reinfeldt waxa uu ku dhawaaqay in dowlada ay ka noqotay qorshihii ay ku doonayeen in ay ku yareeyaan lacagta taageerada ah ee la siiyo ardada.
Qorshaha oo bishii hore uu ku dhawaaqay wasiirka dhaqaalaha Anders Borg ayaa ahaa in lacagta taageerada ardada (Studiebidrag) la yareeyo 300kr. Raysal wasaaraha ayaa sheegay in dowladu halkii ay ka yareyn lahayd lacagta taageerada ay ku siyaadin doonto 1000kr taasoo ah arin aad uga farxin doonta ardada.
Isbedalka ay dowlada degdega u samaysay ayaa muujinaya sida ay uga walwalsanyihiin doorashada soo socota iyo mustaqbalkooda. Waxaa la aaminsanyahay in xulufada dowlada looga adkaan doono doorashada 2014.
asc jimcaale anaa su,aal kuu haya sxb arintii 2 sano xujada looga dhigay maxaad war ka heydaa sxb iyo cidii war ka heeda war bixin hana siido mahadsanidiin
March 16, 2014 at 21:57
Jimacaale dadkii 2sano maxaa war laga hayaa